बन्ने भयो ‘कृ-२’, दोहोरिन्छन् त अनमोल ? बिस्तृतमा हेर्नुस् - Purbeli News
बन्ने भयो ‘कृ-२’, दोहोरिन्छन् त अनमोल ? बिस्तृतमा हेर्नुस्
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ११, २०७४ समय: २२:२७:१०
ईटहरी/ स्टार नायकको उपनाम पाएका अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘कृ’को सिक्वेल बन्ने कुरा बाहिरिएको छ। कृ निर्माता सुवास गिरीको सोलो लगानीमा ‘कृ-२’ उक्त फिल्म निर्माण हुने भएको छ । कृ-२ को लागी नायक अनमोल केसीसँग मौखिक सम्झौता भइसकेको हल्ला बाहिरिएको छ ।
केही दिन अघि जापानमा आयोजना भएको विशेष प्रदर्शनमा निर्माता गिरी, अनमोल केसी र भुवन केसी पुगेका थिए । सोहीक्रममा अनमोलसँग कुराकानी भएको बताइएको छ । बुझिए अनुसार केही दिनमा अनमोलले कृ-२ को लागी कागजी सम्झौता गर्दै छन् ।
अनमोल यति बेला नयाँ फिल्म ‘क्याप्टेन’को तयारीमा लागिरहेका छन् । त्यस्तै सुवास गिरी नायक प्रदीप खड्कालाई लिएर ‘भैरवी’ निर्माण गर्दै छन् । ‘क्याप्टेन’ र ‘भैरवी’को छायाङ्कन पछि ‘कृ–२’को सुटिङ सुरु हुने बताइएको छ । फिल्मका लागी निर्देशक र नायिका भने केही हाल सम्म फाइनल नभएको बुजिएको छ ।